မင်းလှမြို့နယ် Grade3သင်တန်းကမူပြ ဆရာ ဦးစွမ်းထက်မင်း (33နှစ်) မိုးကြိုး ထိမှန် သေဆုံး - MM Live News
မင်းလှမြို့နယ် Grade3သင်တန်းကမူပြ ဆရာ ဦးစွမ်းထက်မင်း (33နှစ်)
မနေ့က မိုးရွာသွန်းစဉ် မိုးကြိုး ထိမှန် သေဆုံးသွားပါတယ် ။
ဆရာရေ Rip ပါဗျာ
ညောင်ဦးမြို့နယ် ဝါခင်းကြီး မူလွန်ကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကွယ်လွန်သူ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မေသန်းသည် G3 သင်တန်းတက်ရောက်နေစဉ်ကာလ 12-5- 2019နေ့က နေပူဒဏ်မခံစားနိုင်သဖြင့် ဆီးချို သွေးထိုး အထက်လှန် အောက်လျော ဖြစ်ကာ ညောင်ဦးဆေးရုံသို့ပြခဲ့ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။G3သင်တန်း တက်ရောက်နေသော သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ ကျန်းမာရေးအသိ အမြဲသတိရှိကျပါ
အခုတစ်လော ပညာရေးဌာနမှာ Grade-3 . Grade-6 သင်တန်းတက်ရောက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ များလာနေပါတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာသီဥတု အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး သင်တန်းတက်နေကြရတာ…
ဒီနေရာမှာ ရောဂါအခံရှိသောဆရာဆရာမများ၊ အသက်ကြီးသောဆရာဆရာမများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆရာမများ အနေနဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ အပူဒဏ်ကြောင့် မလိုလားအပ်သော ပြဿ နာများ ၊ အသက်သေသည်အထိ ဖြစ်နေကြရပါတယ်….
မနေ့က ဆရာမလေးတဟ်ယောက် Grade-3 သင်တန်းမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်… ယောက်ျားဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ ယောက်ျားက ဆိုင်ကယ်နဲ့လာ၊ဆိုင်ကယ်Accidentဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ ကြားရသတင်းက ညောင်ဦးမြို့နယ်က ဆရာမကြီးတစ်ယောက် Grade-3သင်တန်းတက်နေစဉ်မှာ ဆုံးပါးသွားတယ်…
အရင် ခရိုင်အဆင့်မှာ တနင်္သာရီတိုင်းက ဆရာကြီးတစ်ယောက် Grade-3 သရက်ခရိုင်သင်တန်းမှာ လက်ထောက်ပညာရေးမှူးဆရာကြီးတစ်ယောက် ရခိုင်ပြည်နယ်က ဆရာကြီးတစ်ယောက် မလိုလားအပ်ဘဲ အသက်သေဆုံးခြင်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းလို ဖြစ်နေပါပြီ…
ဒီအပူဒဏ်အောက် စာသင်ခန်းတွေမှာ ပန်ကာမရှိ၊ရေမီးမပြည့်စုံ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေပြီး သင်တန်းတက်နေကြတဲ့၊ အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ မပြောနဲ့ ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာတောင် သနားငဲ့ညှာစိတ်၊ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တို့နဲ့ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းတောင် မရှိတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပါ…
အခု G3.G6 သင်တန်းဟာ လေးရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်…
သတင်းဆိုးတွေတော့ မကြားချင်တော့ပါဘူး ဆရာဆရာမတို့ရေ…
သေဆုံးသွားတဲ့ ဆရာဆရာမတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါ…
ကထိန်ကိစ္စဖြင့်စကားများရာမှ လူသေဆုံးတဲ့အထိ ဓားထိုးမှု့ဖြစ်ပွား။
November 18, 2018 MM Live News
အိမ်ထောင်ရေး မဖောက်ပြန်ရန် ဇနီးသည်အားသတိပေးရာမှ ခင်ပွန်းက ရဲဒင်းဖြင့်ခုတ်